ASUS ROG Phone II: Andininy sy vidiny ofisialy | Androidsis
Natolotra omaly ny ASUS ROG Phone II, toy ny telefaona filokana mahery vaika indrindra eny an-tsena. Tamin'ny hetsika fampisehoana nataony dia nahafahantsika nahafantatra ny antsipirihany feno izay manazava tsara fa finday mahery vaika matanjaka indrindra izy io ary hanome antsika fampisehoana tsara. Momba ny daty famoahana azy sy ny vidiny mety, tsy nisy voalaza. Na dia antenaina aza fa mila miandry ela kokoa isika.
Izany indrindra no nitranga. ny vidin'ny kinova samihafa amin'ity ASUS ROG Phone II ity ho an'i Sina. Ka farafaharatsiny mba mahazo hevitra isika hoe ohatrinona ny vola vidin'ity telefaona marika ity any amin'ny firenena Aziatika. Ho fanampin'ny daty fandefasana azy eo amin'ity tsena ity.
Amin'ity fotoana ity dia hamoaka kinova enina amin'ny finday any China ny marika sinoa. Ny efatra amin'izy ireo dia efa azo atao famandrihana eto amin'ny firenena, na tsia Hivarotra hatramin'ny 31 Jolay izy ireo. Nahagaga fa maro ny kinova amin'ity ASUS ROG Phone II ity no ambara, satria amin'ny resaka RAM sy fitehirizana dia iray ihany ny kinova amin'ny telefaona.
Avelanay miaraka aminao ny vidin'ny kinova samihafa amin'ny telefaona, izay voamarina hatreto. Izy rehetra dia azo alefa amin'ny fomba ofisialy izao amin'ny tranokala fivarotana sinoa isan-karazany.
ASUS ROG Phone II mahazatra (12/128 GB): natomboka tamin'ny vidiny 5.999 yuan (781 euro hanovana)
Ny fanontana Tencent Elite (8/128 GB) dia mitentina 3.499 yuan (455 euro amin'ny taha-panakalozana)
Ejoy Peace amin'ny fanontana Beijing miaraka amin'ny 8/128 GB dia mitentina 3.699 yuan (481 euro amin'ny tahan'ny fifanakalozana)
Ankafizo ny fandriam-pahalemana amin'ny fanontana any Beijing miaraka amin'ny 12/128 GB dia mitentina 6.199 yuan (807 euro amin'ny tahan'ny fifanakalozana)
Ho fanampin'ireny dia antenaina fa misy dikan-teny roa hafa amin'ity farany ity eny an-tsena. Na dia eo aminao aza dia mbola tsy natokana hitahirizana azy ireo izy ireo, noho izany dia hiandry hahalala bebe kokoa momba azy ireo isika. Ireo no fanontana Extreme, miaraka amin'ny vidiny 7.999 yuan (1042 12.999 euro eo amin'ny fifanakalozana) ary ny Esports Armor Version misy vidiny 1.693 yuan (30 XNUMX euro amin'ny fifanakalozana). Ity farany dia miaraka amina andiana kojakoja, toy ny charger XNUMXW sy tranga manokana.
Ny fisalasalana dia iza amin'ireo kinova an'ity ASUS ROG Phone II ity no halefa any Eropa, rahoviana ary inona no vidin'izy ireo amin'ny fanombohana voalaza. Azo antoka fa maro amin'izy ireo no napetraka amidy, na dia efa hitantsika aza fa tsy ho mora izy ireo amin'ity lafiny ity. Manantena izahay fa handre anao tsy ho ela.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny vidin'ny ASUS ROG Phone II sy ny daty famoahana dia nambara
Huawei dia voampanga ho niara-niasa tamin'i Korea Avaratra